विविध – Page 8 – Fewa Times
बच्चालाई मोबाइल हेर्नबाट कसरी सीमित गर्ने ? सोचेजति सजिलो छैन (पुरा पढ्नुहोस्)
संयुक्तराज्य अमेरिका – शनिबारको बिहान । १० वर्षीय हेनरी हेली उठिसकेका छन् । उनी पाइजामामै छन् तर उनको माइक्रोफोन जडित हेडफोनमा नीलो बत्ती बल्न थालिसकेको छ । उनी ठूलो स्क्रीनमा बच्चाहरुको लोकप्रिय अनलाइन खेल “फोर्टनाइट” खेल्न थालिसकेका छन् । “लौ ? मैले जित्नै लागेको थिएँ, म त मरें,” उनी गस नाम गरेका......
छोरीलाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिको लिङ्गनै काटिदिए यी पिताले (पुरा पढ्नुहोस्)
एजेन्सी – दक्षिण अफ्रीकामा एक व्यक्तिले धर्म उपदेशकको निजीअङ्गनै काटिदिएका छन्। यसरी धर्म उपदेशकको लिंग काटिएको कारण मृत्यु भएको भन्दै विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्। मृत्यु हुनेमा ६६ वर्षीय मेस मालगास रहेको बुझिएको छ। गत सेप्तेम्बेर ३० मा एक व्यक्तिले ईसाई धर्म......
शनिवार भुलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा, शनिको दशा लाग्छ !
शनिवारको दिनलाई भगवान शनिको दिन मानिन्छ । यदि कुनै व्यक्तिको कुण्डलीमा शनिदोष छ भने त्यस्ता व्यक्तिले शनिवारको दिन भोजन गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । शनिदेवलाई खुसी राख्न चाहने व्यक्तिले पनि शनिवारको दिन भोजन गर्दा केही सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । केही खानेकुरा यस्ता छन् जसलाई शनि देवताले......
अनौठो वेश्यालय, जहाँ सित्तैमा यौनक्रिडा गर्न पाईन्छ
एजेन्सी – स्लोभाकियामा यसतो बेस्यालय छन् । जहाँ सितैमा यौनक्रिडा गर्न पाईन्छ । सुन्दै अच्च्मै लाग्दो होला, सितैमा यौनक्रिडा गर्न पाईने रे । त्यँहा यौनकर्मी महिलाहरुले यौनकर्म गरेबापत आफ्ना ग्राहकबाट रकम असुल्दैनन् । त्यसैले पनि सहवास गर्नका लागी मानिसहरुको लाइन नै लाग्ने गरेका छन् । तर सहवास......
हरेक आमाले आफ्ना छोरीलाई सीकाउनु पर्ने महत्त्वपुर्ण कुराहरु (पुरा पढ्नुहोस्)
हरेक आमाले आफ्ना छोरीलाई बताउनै पर्ने ५ कुराहरु १. स्वाभिमानः हरेक छोरीलाई बताउन जरुरी छ की छोरी केही बन्न सक्छन् र कसैको भर नपरीकन आफ्नो स्वाभिमानमा खडा हुन् सक्छन् । २. आफ्नो काम आफै गर्न सक्नुपर्छ छोरीले आफ्नो काम आफै गर्न आमाले भन्नुपर्छ । आफ्नो कामको बोझ अरुमाथि थुपार्दा निर्भरता बढ्छ । ३.......
यी राशी भएका पुरुषले श्रीमतीलाई असाध्यै माया गर्छन्, कतै तपाई राशी त परेन ? (पढ्नुहोस्)
ज्योतिष शास्त्रकाअनुसार कसैले सुखी र खुशी खोजेर मात्रै पाउने होइन त्यो त आफ्नो ग्रह दशा र राशिअनुसार जुर्नु पर्छ । यहाँ हामी त्यस्ता राशि भएका पुरुषहरुको बारेमा कुरा गर्न गैरहेका छौं जसले श्रीमतीलाई हर समय हर सम्भब खुशी राख्न चाहन्छ । मेष राशी : यो राशी हुने व्यक्तिहरुको पति पत्नी बिचको सम्बन्ध......
सावधान ! भुलेर पनि यस्ता मान्छेलाई साथी नबनाउँहोस्, नत्र जिबनभरि रोएर बस्नुपर्ला
आज हामीले यस्ता पाँच प्रकारका व्यक्तिहरुको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ, जससँगको संगत तपाइँलाई कहिल्यै फलदायी हुँदैन । १. कुरा–कुरामा अपमानित गर्ने साथी–साथीमा हाँसी–मजाक त चलिरहन्छ । यस्तोमा कहिलेकाहीँ अनजानमा बोलिने कुरा र गरिने व्यवहारले चित्त दुख्न सक्छ, यो त सामान्य नै हो । तर, कसैले जिस्किएको......
बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्नुहोस यि ७ काम, सधै हुन्छ फलीफाप ! (पुरा पढ्नुहोस्)
काठमाडौँ – बिहानको समयमा अधिकाँस मानीस शारिरीक व्यायममा केन्द्रित हुन्छन् । व्यायमसँगै पुजापाठमा सक्रिय रहन्छन् । मनलाई शान्त पार्ने, देवतालाई खुशि पार्नमा प्रयत्नशील रहन्छन् । यी दुई कामसँगै अरु के के गर्यो भने हुन्छ फलीफाप ? जानी राखौः १. तामाको लोटामा राखेको पानी खानुहोस् बिहान उठ्ने बित्तिकै......
साबधान ! महिलाहरुले यस्ता कामहरु रातिमा नगरेकै राम्रो, रातिमा गर्नुहोस् यस्ता काम जसले घरमा धन आउँछ..
एजेन्सी – ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता कामहरु हुन्छन् जसलाई महिलाहरुले राति गर्नुहुँदैन । यसका कारण उनीहरुको समेत भाग्य फेरिने गर्छ। महिलाहरुले यस्ता कामहरु रातिमा नगरेकै राम्रो १. सुर्यास्त पछि महिलाहरु कसैको घरमा पनि दुध, दही, नुन, तेल र प्याज लिन जानु हुँदैन । यसो गर्नाले उनीहरुको जीवनमा......
तपाई कुन कलरको लिपिस्टिक लगाउँहुन्छ ? लिपिस्टिकको कलरले खोल्छ महिलाको चरित्र स्वाभाव (पुरा पढ्नुहोस्)
काठमाडौँ – सुन्दर देखिनको लागि कहिल्यै पनि कुनै महिला लिपिस्टिक लगाउन भुल्दैनन् । तपाईलाई थाहा छ महिलाको सौन्दर्य बढाउने मात्र होइन उनीहरुको चरित्र स्वाभावको धेरै राज खोल्छ लिपिस्टिकले । कुन रङको लिपिस्टिक लगाउने महिला कस्ता हुन्छन् ? थाहा पाउनुहोस् ब्लड रेड जो महिला तिख्खर रातो वा ब्लड रेड (रातो......